Snowden, 365 Andro Aty Aoriana: Amin’ny 5 Jiona Hoavy Izao, Lazao Hoe Tsia Amin’ny Fanarahamaso · Global Voices teny Malagasy
Snowden, 365 Andro Aty Aoriana: Amin'ny 5 Jiona Hoavy Izao, Lazao Hoe Tsia Amin'ny Fanarahamaso
Voadika ny 03 Jona 2014 3:12 GMT
Vakio amin'ny teny اردو, Español, русский, Français, Deutsch, English
Sariitatra avy amin'i Doaa Eladl/Web We Want tao amin'ny Flickr (CC BY-ND 2.0)
Tamin'ny 5 Jiona 2013, namoaka ireo andian-tahirin-kevitra voalohany an'ny governemanta izay nataon'i Edward Snowden ampamoaka ny gazety The Guardian. Herinandro sy volana maro taorian'izany, nanaporofo ny ahiahin'ny mpandala ny zo hanana fiainana manokana hatry ny ela ireo tosa-dahatsoratra nivoaka tsy an-kiato: notsikilovin'ireo firenen-dehibe tsy an-kiato ireo fifandraisana nomerika manerantany ary tsy misy ny fanarahamaso izany toe-javatra izany.
Herintaona aty aoriana, mbola mandre sy mahafantatra indray ny raharaha tontosaina manerantany ataon'i Etazonia sy ireo mpiara-dia aminy akaiky isika ary manohintohina ny fahalalahana fototry ny olona amina miliara. Nahita isika fa nanana rafitra miafina hitrohana ny tahirin'ireo orinasan'aterineto ao Etazonia izay mibahan-toerana amin'ny zavatra atao amin'ny aterineto ankehitriny ny governemanta Amerikana. Ary nandre ihany koa isika fa ny mitovy aminy Britanika, antsoina hoe GCHQ, dia manapika sary an-tapitrisany tamin'ny webcam ary mihaino resaka amin'ny alalan'ny hosina aterineto.
Manamarika taona vaovao ny 5 Jiona 2014, ary tsy handrenesana tantaran'ny fanarahamaso faobe ihany, fa taona vaovao hirosoana ho amin'ny fanovana ihany koa. Resaho amin'ny fianakavianao sy ny namanao izany. Lazao ireo mpanao politika mba hanaja ny andraikiny amin'ny fiarovana ny fiainana manokana. Ampio ireo fikambanana mpamorona rindrambaiko malalaka mba hamolavola tolotra azo antoka sy mora ampiasaina mba hahafan'ny rehetra manerantany mampiasa izany.
Inona koa no azonao atao? Indreto sombiny amin'ireo hetsika manerantany amin'ny tsingerintaona voalohany nisian'ny tranga Snowden.
Canada : Hanamafy ny hetsika ataon'izy ireo ny OpenMedia.ca sy ny Protect Our Privacy Coalition (Fiaraha-mientan'ny fiarovana ny fiainantsika manokana) amin'ny fametrahana fepetra aman-dalàna mahomby hiarovana ny mponin'i Canada manoloana ny fanarahamaso ataon'ny governemanta. Hanohana ny fisantaran'andraikitra Reset The Net (Mampiainga hatramin'ny voalohany ny net indray) ny OpenMedia.ca ary handrisika amin'ny fampiasana ny famadihana ho sora-miafina ny votoaty (“cryptage”) ho fomba iray hahafahan'ny olona miady amin'ny fanarahamaso faobe. Hanamafy ny ezaka atao amin'ny solombavambahoaka Kanadiana sy ny praiminisitra Stephen Harper ihany koa izy ireo, handrisika ny praiminisitra handray ny andraikiny amin'ny ataon'ny governemantany ary hiaro ny fiainana manokana antserasera.
Colombia: Hikarakara atrikasa hiarahan'ireo mpanao gazety sy manampahaizana momba fiarovana ny vondrona mpiaro ny zo nomerika Fundación Karisma hananganana taranaka mpikaroka vaovao momba ny teknolojia maharo ny loharonam-baovaon'izy ireo amin'ny alalan'ny fitaovana vaovao amin'ny asa fanoratan-gazety tsara aro.
Meksika: Manamafy ny tolony hoan'ny tsy fitongilanan'ny aterineto, ny fanajana ny fiainana manokana ary ny fahalalaham-pitenana ny olom-pirenena amin'ny fanoherany mafy ny volavolan-dalàna momba ny fifandraisan-davitra natolotry ny filoha Enrique Peña Nieto, volavolan-dalàna izay hanova ny aterineto Meksikana ho fitaovana fitsikilovana sy fanarahamaso. Amin'ny alalan'ny hetsika #DefenderInternet (Miaro ny Aterineto)— sy ny fanohanana avy amin'ny fikambanana mpikatroka Frantsay antsoina hoe La Quadrature du Net ireo mpikatroka Meksikana no mandrafitra habaka mamela ny Meksikana hiantso ireo mpanao lalàna hitakiana ny fametrahana zo fototra ho ivom-pisian'izay volavolan-dalàna rehetra vaovao.
Polonina: Mitontona amin'ny fankalazana ny faha-25 taonan'ny fahalalahana ao Polonina sy ny firodanan'ny Komonisma ny tsingeritaona voalohany nanaovan'i Snowden famoahana tsiambaratelo. Hoavy ao Polonina ny filoha Obama sy ireo filoham-pirenena maro hafa, anisan'izany ihany koa ireo mpanao politika avy amin'ireo firenena izay niharan'ny olan'ny fanarahamaso faobe nataon'ny NSA. Hanararaotra ity fitsidihana ity ny fikambanana Poloney Panoptykon hanasongadinana ny maha-zavadehibe ny zo momba ny fahalalaham-pitenenana sy ny fiainana manokana ao amin'ny firenena izay nanongana fitondrana mpaneritery, sy mahafantatra tsara ny loza ateraky ny fanarahamaso faobe tsy mitsahatra. Herinandro aorian'ny fankalazana ireo tsingeritaona ireo, hankalaza ny tsingerintana faha-5 nisiany ny Panoptykon amin'ny alalan'ny fanatontosana andiana atrikasa mikasika ny fiainana manokana sy ny famadihana ho soramiafina ny votoaty (“cryptage”) ao amin'ny mailaka sy ireo kitro ifaharan'ny fiainana manokana sy ny fiarovana antserasera, ao anatin'izany fankalazana izany ny “cryptoparty” [fetin'ny famadihana ho sora-miafina ny votoaty] tohanan'ny hackerspace (tahalan'ny fisovohana) ao Varsovia.
Espaina : Ao Barcelone, mikarakara Take Back The Net [Miverina mandray ny Aterineto indray] ny Fikambanana ho amin'ny fampivelarana ny Fifandraisana amin'ny 4 sy 5 jona ho avy izao. Ao ireo mpikatroky ny zon'olombelona sy ny mpamatsy teknolojia no hizara fahalalàna mikasika ny fiantraikan'ny fanarahamaso amin'izy ireo, sy hiara-hiasa hampianatra momba ireo fitaovana hiaka farany hoan'ny olona mila izany. Afaka manatevin-daharana ny “Take Back the Net” ao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ianao, na mikarakara “CryptoParty” [fetin'ny famadihana ho sora-miafina ny votoaty] any amin'ny manodidina anao (tahaka ny nataon'i Snowden tao Hawaï tamin'ny 2012
Okraina : Amin'ny 6 ka hatramin'ny 8 jiona, hamadika ny tanànan'i Yanukovitch ao Mejyhirya akaikin'i Kiev ho sehatra fifampizarana fahalalàna ny (fikambanana) SHARE Defense (ZARAO ny fiarovana). Hivory ireo mpikatroka mba hizara traikefa sy hiady hevitra momba ireo olana mahakasika ny fahalalaham-pitenena, ny fanadihadiana amin'ny asa fanoratan-gazety, ny fiarovana nomerika ary ny fikatrohana amin'ny endrika valandresaka, adihevitra misokatra ary atrikasa. Tamin'ny 22 Febroary, taorian'ny fihonganan'ny governemanta Yanukovitch sy ny fandosiran'ity farany, nosokafana hoan'ireo mpanohitra, mpikatroka sy mpanao gazety ny lapa Mejyhirya, trano fonenany any ambanivohitr'i Kiev. Nahitàna antontan-taratsy maherin'ny 200 milaza ny antsipirahan'ireo zavatra nataon'ny filoha teo aloha izany. Mandritra ny hetsika ny SHARE Defense no hampahafantatra ny vokatry ny fanadihadiana farany mikasika ireo antontan-taratasy ireo sy lahatsary fanadihadiana hafa mikasika ny YanukovychLeaks (vaovao tafaporitsaka momba an'i Yanukovych).
Fitondram-Panjaka Mitambatra (UK) : Amin'ny 7 Jona ho avy izao, hampiely ny tolony hanakanana ny fitsikilovana ataon'ny GCHQ amin'ireo Britanika ny Firaisamben'ny Don’t Spy on Us (Aza mitsikilo anay) mandritra ny hetsika misokatra hoan'ny dahobe ao afovoan'i London. Lanonana ampiatranoan'ny The Guardian, anisan'ireo mpandray fitenenana mandritra ny hetsika i Cory Doctorow, Alan Rusbridger, Bruce Schneier, Neil Tennant, Shami Chakribarti, Lord Richard Allan, la Baronne Helena Kennedy, depiote Claude Moraes, Ian Brown, Caspar Bowden, Gabrielle Guillemin, sy ny sisa maro hafa. Mbola afaka manatevin-daharana ny firaisambe ianao ato ary mijery ny antsipirihan'ny hetsika ato.
Etazonia: Nandray fepetra ara-teknika izahay mba hiarovana ny fiainana manokana miaraka amin'ny Reset The Net, hetsika mandrisika ireo orinasa mba hametraka fiarovana ao amin'ny habaka sy ny fampiharan'izy ireo mba hanaporofoana ny fanarahamaso ataon'ny sampam-pitsikilovana ary hanaparitaka ireo fitaovana manokana maharo amin'ny NSA any amin'ny namantsika sy ny mpifanolo-bodirindrina amintsika. Fisantaran'andraikitra hafa tontosaina amin'ny 5 Jiona hanamafy ny fanerena any amin'ny sehatry ny aterineto ny Fidirana amin'ny [Avadiho ho soramiafina avokoa ny zava-drehetra] Encrypt All The Things mba hanakanana ny tahirin'izy ireo ho tratran'ny fitsikilovana.
Hikarakara fanentanana, hiresaka amin'ireo mpanao lalàna sy hanatontosa hetsika mivantana manerantany ireo mpikambana ao amin'ny Firaisambe iraisam-pirenena tompon-kevitra amin'ny Fepetra ilaina sy sahaza hanoherana ny fanarahamaso tsy voamarina (maro amin'izany ireo vondrona efa voalaza etsy ambony). Hampahafantatra ny setriny nataon'ny governemanta avy amin'ny firenena maro manoloana ny ampamoakan'i Snowden – sy izay zavatra hafa mety ho mbola azon'izy atao i Simon Davies, iray amin'ireo andrin'ny hetsika manerantany hiarovana ny fiainana manokana.
Ampafantaro anay ny ataonareo hanoherana ny fanaharahamaso ao amin'ny firenena misy anareo amin'ny 5 Jona na aorian'izany. Alefaso ao amin'ny @Advox ny sioka ary mandefasa hafatra ao amin'ny rindrin'ny Facebook-nay, na mandefasa mailaka ao amin'ny advocacy[at]globalvoicesonline[dot]org .